कोरोना भाइरस किन दोहोरिन्छ ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
कोरोना भाइरस किन दोहोरिन्छ ?
कोरोना भाइरस वा यस किसिमका कुनै संक्रमण एकपटक भएपछि शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्छ भन्ने सामान्य मान्यता छ। त्यसपछि त्यही भाइरस दोस्रो पटक उक्त व्यक्तिमा संक्रमण दोहोरिदैन।
तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणपछि निको भएका कयौँ व्यक्तिमा गरिएका परीक्षणमा भने भाइरस ‘पोजिटिभ’ देखिएको छ। त्यसो भए के यो भाइरस अरूभन्दा अलग हो ?
७० वर्षीय एक व्यक्तिको मामलामा चिकित्सकलाई यसले हैरान ग¥यो। यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उनलाई टोक्योको एक अस्पतालमा अन्य बिरामीसँग अलग गरी राखिएको थियो। जापानको टेलिभिजन च्यानल एनएचकेका अनुसार ती व्यक्ति पूर्ण तवरले कोरोना भाइरसमुक्त भएका थिए। उनमा गरिएका पछिल्ला परीक्षण नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिएको थियो।
डिस्चार्ज भएपछि उक्त व्यक्ति सामान्य दैनिकीमा फर्किएका थिए। साथै पहिलेझैँ सार्वजनिक स्थानतिर पनि जान थालेका थिए। तर केही दिनमै उनको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो अनि ज्वरो आउन थाल्यो। त्यसपछि चिकित्सकले उनको पुनः कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो। यस घटनाले चिकित्सकलाई चकित पा¥यो।
दोस्रो पटक अस्पताल जाने यो जापानमा पहिलो र एकलो घटना भने होइन। दोस्रो पटक भाइरस पोजिटिभ देखिएका घटना थुप्रै भेटिएका छन्।
लुई एखुआनेस स्पेनिस नेसनल सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी (सीएसआईसी) का अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनका अनुसार कम्तिमा १४ प्रतिशत संक्रमण दोहोरिएको घटना पाइएको छ।
अनुसन्धानबाट नयाँ भाइरस संक्रमण फेरि नभई सुषुप्त भएको पहिलेकै भाइरस शरीरमा आफै बढेको खुलेको छ। यसलाई स्वास्थ्य विज्ञानमा ‘बाउन्सिङ ब्याक’ भनिन्छ। ‘एकपटक कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि उक्त भाइरससँग लड्ने व्यक्तिको प्रतिरोधात्मक शक्ति सधैँका लागि क्षीण भएर जान्छ,’ अनुसन्धानकर्ता एखुआनेसले भनेका छन्, ‘जब व्यक्तिको प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ पहिलेदेखि शरीरमा सुषुप्त रहेको भाइरस पुनः सक्रिय हुन्छ।’
के भाइरस शरीरभित्र रहन्छ ?
कुनै भाइरस मानिसको शरीरभित्र तिन महिना वा सो भन्दा बढी समयसम्म रहन सक्छ। ‘पहिले कुनै व्यक्तिमा भाइरस भेटेर परीक्षण नेगेटिभ देखिए ती व्यक्तिको शरीरले उक्त भाइरससँग लड्न सिक्यो भन्ने बुझिन्छ’, एखुआनेसले भनेका छन्, ‘यसकारण फेरि ती व्यक्तिमा उक्त भाइरस संक्रमण हुन सक्दैन।’
तर कुनै बेला शरीरको केही तन्तुमा भाइरस लुकेर सुषुप्त बसेको हुन्छ, जहाँ शरीरको रोग प्रतिरोधक असर कम परेको हुन्छ।